Eyona ndawo yokutyela ibiza kakhulu emhlabeni | Uhambo lweNdaba
UMariela Carril | 28/04/2022 17:00 | Ukuhlaziywa ukuba 30/04/2022 01:29 | IGastronomy, Ibiza
Ndiyazithanda iindawo ezintle kodwa andinamali eninzi, ngoko kufuneka ndizibonele kumabonwakude okanye kumaphephancwadi. Ndihlala ndisithi ukuba bendinemali eninzi bendiya kuyichitha ndisiya kwezo ndawo zokutyela kunye neehotele zoosozigidi, hayi inkonzo kodwa ngeendawo, amava kunye neencasa ezinikezelayo.
Ukuthetha ngeendawo zokutyela, Yeyiphi eyona ndawo yokutyela ebiza kakhulu ehlabathini? Ewe, iyahluka kumaxesha ngamaxesha, kodwa kubonakala ngathi namhlanje i Indawo yokutyela yaseSpain yintoni ngaphakathi Ibiza: i I-Sublimation.
Ukuba unemali eninzi ke ungaya uyonwabele inkonzo yale ndawo yokutyela ese-Ibiza, eSpain. Yasungulwa ngo 2014 kwaye kukuyilwa kwengqiqo ye Paco Romero, ngokuxhomekeke kwindawo ephambili yokupheka kweli lizwe. kwanele ukutsho ukuba inalo I-3 ye-Repsol soles kunye neenkwenkwezi ezimbini ze-Michelin. Akukho nto imbi.
Yintoni le inikezelayo kule ndawo yokutyela ingaphezulu kwesitya, iyonke amava culinary uyazi phi ukudibanisa iteknoloji, gastronomy kunye nomboniso. Yonke into kunye, kodwa ngokucacileyo, i-cuisine ikumgangatho ophezulu kuba ngasemva kwayo kukho abapheki uDani García, uToño Perez, u-Diego Guerrero noDavid Chang kunye nomphathi wepastry uPaco Torreblanca.
Inyani yeyokuba kwihlabathi apho kuhlala kumalunga nokwenza umahluko, umbono wendawo yokutyela kukuhamba inyathelo elinye kwi-gastronomy kwaye unganikezeli ngokutya kuphela, okucacileyo kunye nokulula, kodwa amava. Kule mihla, kuzo zonke iindawo, kubonakala ngathi into ekufuneka yenziwe kukunganikezeli ngenkonzo kodwa ngamava antywilayo kangangoko kunokwenzeka.
Ke, kukho ukutya, kukho abaqulunqi, kukho abakhohlisi, kukho amagcisa, abaqulunqi beesethi, iimvumi, ababhali beskripthi kunye nokunye okuninzi. Umboniso wokwenyani ulungelelaniswe malunga nezidlo, kwabo umgangatho wabo kunye nobukrelekrele umntu uhlala ebona eHollywood okanye kwiBroadway.
kwi sublimation kukho indawo yabantu abali-12 kuphela ezingalungiselelwanga kwiitafile ezininzi kodwa kwenye. Ukutya kunye neendwendwe zi-protagonists kwaye ukususela ngoku uhlala phantsi etafileni umboniso uqala. Umboniso onokuthi, ekuphakameni kwendawo, iteknoloji yesimanje yokwenza ukuba ingalibaleki ngokwenene. Kwaye yeyiphi iteknoloji esithetha ngayo? Ye nyaniso...
Ingcamango kukuba i-diner inako hamba ngaphandle kokushiya isitulo, indawo yokutshintsha, nge umdlalo wemifanekiso, izibane, iingqikelelo ezahlukeneyo kunye nomculo. Kwaye okwangoku, yonwabela imenyu eyenziwe zizitya ezininzi ezingaqhelekanga. Imenyu, nayo, iqulathe 14 izitya, iziselo kunye nezimuncumuncu ezimbini. Nganye, kwaye uhambo luyaqhubeka ukuya esiphelweni.
Isidlo siqala nge-cocktail, iwhiskey ebiza kakhulu enokubiza i-euro ezingama-240 ibhotile. Kwanele ukutsho ukuba yenziwe ngesandla kwaye inentaphane yevumba elimnandi kwaye awuzukwenza inkalakahla kunye nempumlo yakho kuba yeyona nto igudileyo, yeyona nto ingaqhelekanga kwaye inencasa emhlabeni. Kwaye ngokucacileyo, ayikuko ukuba bayayikhonza ngokulula nokuba sisiqalo esihle eso.
Imenyu ayisoloko ifana, kodwa ngokuqinisekileyo uya kufumana ezininzi umvelisi wolwandle, umzekelo iimbatyisi ezivundiweyo, iimbaza, iirazor clams okanye amakhola. Xa imenyu ibandakanya intlanzi kunye ne-shellfish igumbi lonke liba lulwandle nobunzulu balo. Ukukhanya, imibala...
Emva koko utshintshe indawo usenokuba uzibhaqa usehlathini elixineneyo ukutya amakhowa kunye nemifuno okanye kwidolophu yaseItali, ngomculo ovela kuThe Godfather, ukungcamla imifuno yasegadini. Kamva kufika ithuba lokusetyenziswa iiglasi zokwenyani ezingokoqobo. Ke, singena ngokupheleleyo kwinyani yenyani ekunika yona ulwazi lwesithako yento oza kuyitya kunye neresiphi yamalungiselelo afakwe kwividiyo.
Ngaba unokuyithelekelela loo nto? AyingoBlade Runner kanye lo? Kwaye xa ucinga ukuba ukwinkulungwane yama-XNUMX kungenzeka ukuba uvele ngokukhawuleza kuloliwe obukekayo kwaye isitya etafileni yakho sahluke ngokupheleleyo. Inkalakahla namehlo akayeki ukwenza izinto ezimangalisayo.
Ngaba ikho indawo umboniso olungileyo okanye isekisi? Kwakhona, kodwa iimveliso ezithengiswayo zizitya, kunye neencasa, akukho nto wakha wayingcamla. Ngaba ucinga ukuba enye ibarbecue yinto eqhelekileyo? Ewe, kodwa kulo mculo kunye nomdaniso uhamba kunye, kwaye, ngokumangalisayo, i-whisky ibonakala kwakhona kodwa enye incasa, i-smoky, ephindaphindiweyo kwi-sauce ye-barbecue. Khumbula ukuba apha iziselo zizona zidityaniswa nokutya okwenziwayo, ngoko ke abapheki baye bacinga ngayo yonke into. Isitya ngasinye sinesibini saso kwisiselo kwaye ngokuphambene.
Ekugqibeleni, iidessert ezifika kunye nompheki kwisidlo ngasinye esilungiselela kanye apho, ecaleni kwakhe. Ingaba yi-sponge ye-yogurt, i-cream cream, i-mousseline ye-orange ... I-dessert yesibini izisa i-chocolate ngesandla kunye ne-whisky entsha, ukuba ingatshintshi, ibiza kakhulu. Ikwiglasi kodwa nakwi dessert ngokwayo, ibhibhisa ikeyiki kunye nencasa yomthi.
Bendingazi noba izitya zininzi, ndiyathandabuza, kodwa apha ubhatala into eyahlukileyo. Kwaye yimalini ehlawulweyo? Malunga ne-euro ezingama-2000 kwisidlo ngasinye. Nangona kubonakala ngathi kuninzi, akukubi konke konke xa sicinga ukuba sithetha ngendawo yokutyela e-Ibiza apho isiselo sinokuba phakathi kwe-250 kunye ne-600 ye-euro ukuba yeyophawu oluhle. Umnyango wePacha, omnye umzekelo, ujikeleze i-euro ezingama-500 ngomntu ngamnye, ngoko ukuba sithetha ngamaxabiso, i-Sublimotion ayiveli kwenye iplanethi.
Eyona nto ingcono kukuba nabani na oneeuro epokothweni yakhe unokuhlawula kwaye abe khona phakathi kwezo zitya zilishumi elinambini. Ngoko nangaliphi na ithamsanqa omnye wabafundi ofunda nabo usenokuba ngumntu odumileyod, ngubani owaziyo? Inyaniso kukuba ukuba uzimisele hlawula malunga 1600 euro Uza kuphila amava amahle, iincasa, umboniso, inkonzo, yonke into ilunge kakhulu kwaye ayilibaleki. Ngamagama amabini: ubugcisa bokupheka.
Ngaba kukho abantu abaqhelekileyo abazimisele ukuhlawula loo mali ngesidlo sangokuhlwa? Ngokuqinisekileyo, kukho abantu abazimisele ukuhlawulela kakhulu itikiti lokubona umdlalo wokugqibela weNdebe yeHlabathi. Okanye hayi? Kubonakala ngathi abatyeleli bashiya i-Sublimotion yanelisekile kakhulu, ngoko ukuba uthanda amava ngaphezu kokuthenga izinto, unokucinga malunga nokutyala imali ngobusuku obungenakulibaleka ngokwenene.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Spain izixeko » Ibiza » eyona yokutyela ibiza kakhulu ehlabathini
Yintoni onokuyibona eCastello de la Plana